ကဲ… ဘယ်နေ့လို့ သတ်မှတ်ကြမလဲ… | မောင်ဂုရု သရော်သည်။
ကဲ… ဘယ်နေ့လို့ သတ်မှတ်ကြမလဲ…
Filed under: Uncategorized — gurugyi @ 1:04 pm
လူမှုရေးစည်းကမ်းတင်းကျပ်လှတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်က မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ… ဈေး လယ်ကောင်မှာ အဝတ်မပါ (ဝါ) ဝတ်လစ်စလစ် (ဝါ) ကိုယ်လုံးတီး (ရှင်းလောက်ပါပြီနော်.. မရှင်းရင်ပြောပါ…) မြင်းစီးပြသတဲ့.. ဘာကြောင့်စီးသလဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ဖတ်ကြည့်ဗျာ….
ဒါပေမယ့် ၁၁ ရာစုလောက် က မိန်းမတစ်ယောက်က အဆန်းထွင်ပြီး လုပ်ခဲ့တာကို ခု ဒီမိန်းမကြီး နံမည်နဲ့ နေ့တစ်နေ့သတ်မှတ်ပြီး အဲဒီနေ့ရောက်တိုင်း အဲဒီမိန်းမကြီး လုပ်ခဲ့သလို လိုက်လုပ် နေကြလေရဲ့ဗျာ… မယုံရင် ဒီမှာကြည့်…
ဟုတ်ပီနော်…. Think global လို့ပီးပီ…
အင်တာနက်ဆိုတာကြီး နဲ့ ဟန်းဖုန်းဆိုတာကြီး ခေတ်စားလာတဲ့ ကာလ အဦးအစ လောက်မှာ.. တစ်ချို့တစ်ချို့သော… မိန်းကလေး.. မိန်းမလတ်… မိန်းမငယ်… မိန်းမရွယ်တွေ ရဲ့ အဝတ်မပါ (ဝါ) ဝတ်လစ်စလစ် (ဝါ) ကိုယ်လုံးတီး (ရှင်းလောက်ပါပြီနော်.. မရှင်းရင်ပြောပါ…) ပြသူအားမရ… ကြည့်သူမဝ ပုံတွေ အစဉ်လိုက် ပေါ်လာလိုက်တာ… link ပေးရင် blog ကိုယ်တာ ပြည့်လောက်တယ်..
နောက်ဆိုရင် … ငါက အားလုံးရဲ့ အဦးအစလို့များ.. hip-hop သမားတွေလို.. generation ခွဲကြဦးမှာလား… ဟို ၁၁ ရာစု က သိုးဆောင်းမကြီးလို … နေ့တွေ ဘာတွေ သတ်မှတ်ကြဦးမှာလား… အဲလိုဆိုရင်လည်း ပြောနော်…